Sawirro: Abaaraha oo sababay barkaca qoysas badan - BBC News Somali
Sawir qaade Mustafa Saciid ayaa muddo 8 maalmood ah ku qaatay Somaliland isagoo sii raacay shaqaalaha hay'adda save the Children. Wuxuu la kulmay xooladhaqato xoolohoodii ay laysay abaarta.
In badan oo ka mid ah dadka ay xoolahoodii ka dhamaadeen waxa ay nolol u raadsanayaan magaallooyinka sida Ceynabo iyagoo rajo ka qabo inay gargaar cunto ka heli doonaan dadka deegaanka iyo hay'adaha caalamiga ah.
Fardoos waxay tiri : " Markii ay xoolaha naga dhamaadeen, waxaan waynay cunto, biyo iyo hoy. Halkan waxaan u imid inana caruurteyda u raadiyo wax ay cunaan."
Saado waxay ka soo qaxday gobolka beri ee Somaliland ka dib markii xoolaheeda oo tiro gaarayay ay ka dhamaadeen. Afar ka mid ah caruurteeda ayay la dagtay Dilla oo ku taalla galbeedka Somaliland halkaasoo haddana xoolihii u soo haray qeyb ka mid ah ay ku la'deen. 50 neef oo ido iyo riyo isugu jira ayaa u soo hartay. Aad ayaay u jilicsan yihiin oo suuq lama gayn karo, caanana inay soo saaraan warkooda daa.
"Baahideena ugu wayn waa cuno, ayay tiri Saado."
"Xooladhaqato ayaan ahayn markii ay abaartu dhacday. Dhammaan xoolihii aan lahayn ayaan weynay. Halkan ayaan dabadeedna u soo cararnay," ayay tiri Khadra.
"Guri halkan kuma lihin. Cooshada ayaan ku noolnahay. Dad ayaa na amaahiyay cunto. Hay'ado caalami ah ayaa sidoo kale halkan nagu caawiyo.''
Deeqa qoyskeeda waxaa hortooda ku dhintay 100 neef oo lo' ah, dhowr neef oo riyo ah ayaa u soo hartay' iyagana aad ayay daciif u yihiin oo wax qiimo ah oo ay u leeyihiin ma lahan.
Indhodeeq xoogaa lacag ah ayaa waxaa siisay hay'adda Save the Children. lacgtaas ayay qoyskani ku gateen xoogaa cunno, caano iyo dawo ah.
Waxay tiri: " Way dhammaadeen inta badan arigii iyo geelii aan lahayn. Ninkeyga ayaa geelii soo haray u qaaday suuqa xoolaha. Waxaan halkan nimid inagoo rajo ka qabno in hay'adaha gargaarka ay na diwaangelin doonaan si ay gargaar inoo siiyaan.''
ka dib markii uu ninkeeda furay, Faaduma waxay u safartay tuulo ku taalla duleedka Yogoori. Waxay wadataa seddax caruur ah oo ay dhashay. Wiilkeeda, Kulmiye oo hal sano jir ah waxaa lagu arkay nafaqo darro. Faaduma waxay ka mid tahay dad ay hay'adda Save the Children u diwaangelisay inay siiso lacago caddaan ah si ay nolosheeda ugu maareyso.